Fannaankii weynaa Cabdi Tahliil Warsame oo ku geeriyooday Muqd... | Universal Somali TV
Allaha u naxariistee waxaa goor dhow Magaalada Muqdisho ku geeriyooday hobolkii weynaa ee Cabdi Tahliil Warsame, oo sanadihii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa Caasimadda Muqdisho.
Hobolka ayaa ku geeriyooday Isbitaalka Xaawo Cabdi oo ku yaala agagaarka Isbitaal Banaadir ee Degmada Hodan, waxaana uu geeriyooday saacado yar uun ka dib, markii isbitaalkaasi lagula cararay.
Xamdi Cabdi Tahliil oo ka mid ah carruurta uu dhalay hobolka ayaa xaqiijisay in aabaheyd uu ku geeriyooday Isbitaalka Xaawo Cabdi, iyadoo xustay in labadii habeen ee la soo dhaafay uu aad u liitay.
"Labadii habeen ee ugu dambeysay aabe lagama seexan, aad ayuu u xanuunsanaa, markii dambe waxaan geynay Isbitaal Xaawo Cabdi oo ku yaala agagaarka Isbitaal Banaadir. Aabe wuxuu dhintay saacadda marka ay ahayd 2:25am." Ayay tiri Xamdi Cabdi Tahliil.
Xamdi oo la hadashay Universaltv ayaa intaa ku dartay "Hadda waxaa nala joogga Masuuliyiin Dowladda ka tirsan oo tacsi noogu yimid, waxaana ku guda jirnaa qaban-qaabada aaskiisa iyo meeshii lagu aasi lahaaba."
Sidii caadada ahaydba waxaa geerida hobolka ka tacsiyadeeyay Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye), oo hobolka ku tilmaamay inuu ahaa mid ka mid ah tiirarkii Hobolada Qaranka ee Waaberi.
Cabdi Tahliil ayaa dayac iyo daryeel la'aan ugu geeriyooday Magaalada Muqdisho, iyadoo aanu Dowladda Federaalka ka helin taageeradii uu uga baahnaa, xilli hoygiisa uu ku yaalo xaafadda Ex Fiyoore oo kaabiga ku haysa Madaxtooyada Qaranka ee Magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee Cabdi Tahliil Warsame oo ka mid ahaa Hoboladii Waaberi ayaa ku luqeeyay heeso fara-badan, oo ay dadka jecleysan jireen. Mid ka mid ah heesaha aadka loogu xusuusto ayaa ah heestii Onkod ee oraneysay "Ifkaa laysku turaayee, iilka laysma gargaaroo."
Kan-xigaHiba Nuura oo si dareen leh uga hadas...
Kan-horeKiisaska COVID-19 ee dalka oo aad u k...
54,018,174 unique visits